नेपालमाथी चीनले सीमानामा बल प्रयोग सुरु गर्यो ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमाथी चीनले सीमानामा बल प्रयोग सुरु गर्यो !
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । भारतले नेपालको विभिन्न भुभागमा कब्जा जमाएर बसेको छ । यो बीचमा चीनले पनि नेपाली भुमि मिचेको आरोप लाग्ने गरेको छ । केही महिना पहिले हुम्लामा नेपाली भुमि मिचेर चीनले भवन निर्माण गरेको आरोप लागेको थियो ।
यस विषयमा सरकारले नमिचेको भन्दै स्पष्टिकरण दिइसकेको छ । सरकारले विस्तृत अध्यन नगरेर सीमाबारे दिएको बयानलाई लिएर सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ । विवादमा रहेको भनिएको हुम्लामा सीमा स्तम्भ अनुगमन गरेर फर्किन लागेका नेपाली टोलीमाथि चिनियाँ सेनाले अ’श्रु ग्या’स प्र’हा’र ग’रेको खुल्न आएको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको टोली अनुगमनबाट फर्कने क्रममा चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले अ’श्रु’ ‘ग्या’स’ ‘प्र’हा’र गरेका हुन् । त्यहाँको नाम्खा गाउँपालिकासँग जोडिएको चीनसँगको सीमास्तम्भ अनुगमनका क्रममा चिनियाँ पक्षले अ’श्रु ‘ग्या’स’ प्र’हा’र’ गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको ५, ६, ७ र ८ नम्बर सीमा स्तम्भको अनुगमन गरेर फर्किँदै गर्दा ९ नम्बर सीमास्तम्भ नजिकै टि’यर ग्या’स प्र’हा”र गरेको जानकारी दिइएको छ । यस विषयमा चीन वा नेपाल दुर्वतर्फका सरकारले कुनै प्रतिकृया जनाएका छैनन् ।